Lalatiana Free FM : Vorondolo, Voromanga… -
AccueilRaharaham-pirenenaLalatiana Free FM : Vorondolo, Voromanga…
Mitafy henatra tanteraka ny tontolo politika manoloana ireny fanambarana maro samihafa ireny, indrindra ny fanambarana farany nataon’i Lalatiana Rakotondrazafy avy amin’ny antoko Freedom…
Nanambara i Lalatiana Rakotondrazafy fa manohana an’i Andry Rajoelina amin’ity fifidianana filohan’ny repoblika ho avy izao ity satria “i Andry Rajoelina irery no mahafeno fepetra sy niomana ho amin’izany nandritra ny taona maro”, hoy ity filohan’ny Freedom ity. Raha nisy olona ratsy indrindra teto ambonin’ity tany ity teo anatrehan’i Lalatiana Rakotondrazafy ny taona 2012 ka nanaovany fanambarana sy teny mahery saika isan’andro dia i Andry Rajoelina. Namoahan’ny minisitra Christine Razanamahasoa didy fisamborana ny tenany tamin’izany andro araka ny baikon’i Andry Rajoelina. Voatery nialokaloka tany amin’ny ambasadin’i Afrika Atsimo izy tamin’izany fotoana izany noho i Andry Rajoelina. Voatery naato ny fandaharana tao amin’ny Free FM noho i Andry Rajoelina. Tsy nisy izay tsy nahazo an’i Lalatiana tamin’izany andro izany, ary tsy nisy vava tsy nataony tamin’i Andry Rajoelina ihany koa. Niozona tamin’ny tany aman-danitra mihitsy i Lalatiana Freedom tamin’izany, tsy misy fohy fitadidy akory eto ary voarakitra anaty horonam-peo avokoa izany.
Misy fomba fitenenana malagasy manao hoe: “ny Vorondolo tsy mitera-boromanga!”. Ny tiana ambara amin’izany dia hoe “ny zavatra ratsy na tsy tomombana na koa misy lesoka tsy ho lasa zava-tsoa sy kanto na mendrika velively”. Fa i Lalatiana Rakotondrazafy irery ihany no mahita fa mitovy izany Vorondolo sy Voromanga izany. Izany hoe, ilay olona nambarany imasom-bahoaka fa ratsy, tsy mendrika, tsy misy ilàna azy ihany no ambarany ihany koa fa mendrika, tsara, feno, sns. Nofitahin’i Lalatiana avokoa ‘nge izany ireo olona nanara-dia azy ny taona 2012 e! Nofahanany lainga daholo nge izany ireny olona maro be niray feo taminy fa “tsy mamely” ity Andry Rajoelina ity e! Loza ihany ity fanaovana politika eto amintsika ity, lainga sy fitaka daholo!